I-E-Commerce Yekhasimende-Okokuqala: Izixazululo Ezihlakaniphile Zento Eyodwa Ongakwazi Ukuyithola Ukuze Zenze Okungalungile | Martech Zone
ULwesithathu, April 21, 2021 ULwesithathu, April 21, 2021 UZain Jaffer
I-pivot yesikhathi sobhadane eya e-commerce ize nokulindelekile okulindelwe ngabathengi. Uma sekungezwe inani, iminikelo eku-inthanethi manje isiphenduke indawo yokuthinta yamakhasimende eyinhloko yemikhiqizo eminingi yokuthengisa. Futhi njengomugqa ophambili wokuxhumana kwamakhasimende, ukubaluleka kokusekelwa kwamakhasimende okubonakalayo kuphakeme ngaso sonke isikhathi.
Insizakalo yamakhasimende e-E-commerce iza nezinselelo nezingcindezi ezintsha. Okokuqala, amakhasimende asekhaya asebenzisa isikhathi esiningi online ngaphambi kokwenza izinqumo zokuthenga.
Abangu-81% abaphendulile bacwaninge umkhiqizo wabo ku-inthanethi ngaphambi kokwenza isinqumo sabo sokuthenga. Leyo nombolo imele ukukhuphuka okuphindwe kane ukusuka emvamisa yangaphambi kobhadane engama-20% kuphela. Ngaphezu kwalokho, ucwaningo luthole ukuthi abathengi manje basebenzisa isilinganiso sezinsuku ezingama-79 beqoqa imininingwane online ngaphambi kokukhetha umkhiqizo noma inkampani ngezinqumo zabo ezinkulu zokuthenga.
Source: I-GE Capital
Emhlabeni oqhubeka uxhuma futhi unelukuluku, isipiliyoni samakhasimende kumele kube yinto eza kuqala kunkampani. Emuva ngo-2017, cishe 93% yabathengi uthe ukubuyekezwa okuku-inthanethi kube nomthelela ezinqumweni zabo zokuthengisa — ngesikhathi esithe xaxa ezandleni zethu kanye nokuhweba okwenzeka ezikrinini zethu, lelo nani likhuphukile kuphela. Abathengisi abasakwazi ukukhokhela isipiliyoni samakhasimende aku-inthanethi. Ukuqinisekisa ukusebenzisana okuhle, okubonakalayo akuyona isu lokuthengisa, kuyisu lokusinda. Futhi sekubaluleke kakhulu eminyakeni yobudala ye-COVID.
Ngezansi kunamasu ambalwa wensizakalo yedijithali adingwa yibo bonke abathengisi ababonakalayo.
Ubuchwepheshe Bokushesha Okungcono: Ngoba Isikhathi Sakho Konke
I-ethos ye-Intanethi iyashesha. Singasetshenziselwa ukuhleleka ezikhungweni ezinkulu zokuthenga, kepha akekho ofuna ukulinda ukuze athole ukusekelwa okubonakalayo. Lokhu kuveza isithiyo esiyingqayizivele kubathengisi be-e-commerce, abangakwazi 'ukuvala iminyango ebonakalayo' lapho iwashi lishaya ngo-7 ntambama.
Ukuqeda izikhathi zokulinda ezibonakalayo futhi uphathe lesi sidingo esisha se-washi, abathengisi baphendukela kakhulu kuzingxoxo zezingxoxo zezisombululo zamakhasimende. Ama-Chatbots asebenzisa ubuhlakani bokufakelwa ukuzibandakanya ngenkuthalo namakhasimende, noma ngabe kungumbhalo, ukuthumela imiyalezo ekhasini lewebhu, noma ngocingo. Izinga lokwamukelwa kwama-chatbots lakhula kulo lonke lolu bhubhane, njengoba abathengisi bebona ukuthi ukuphathwa kwamakhasimende okuzenzakalelayo kunciphisa izindleko zabo zokusebenza. Ama-Chatbots anikela ngezindlela ezihlelekile zokuqoqa inkokhelo, ukucubungula ama-oda noma izimbuyiselo, nokusevisa amakhasimende angaba khona — konke ngaphandle kokulahlekelwa isigqi.
Ngokwalesi sizathu, Umbiko wakamuva weBusiness Insider akufanele kusimangaze. Babikezele ukuthi ukuthengiswa kwabathengi okuchithwa ngezingxoxo emhlabeni wonke kuzofinyelela ku- $ 142 billion eminyakeni emithathu ezayo. Baphinde bathola ukuthi cishe ama-40% wabasebenzisi be-Intanethi empeleni Khetha ukusebenzisana nezingxoxo ezingaphezulu kwezinye izinhlelo zokusekela njengama-ejenti angokoqobo.
I-Tech Yesipiliyoni Esihlanganisiwe: Izinga Elisha Lomthengi
I-E-commerce ihlukile ngoba ingenzeka noma yikuphi. Imikhiqizo ayikwazi ukuthembela ngaso sonke isikhathi ukuthi abathengi bahleli ekhaya phambi kwabaqaphi abanesilinganiso esigcwele newebhusayithi yabo iboniswe kahle. Imvamisa, abathengi basebenzisana newebhusayithi yomkhiqizo efonini yabo ephathekayo phakathi kwemisebenzi yansuku zonke. Kepha idatha iqoqwe yi-Statista khombisa ukuthi kuphela i-12% yabathengi ababheka ulwazi lwabo lwezohwebo lweselula njengolulula.
Ukunyakaza okubonakalayo kufaka ingcindezi entsha kubathengisi ukuze bathuthukise ulwazi lwabo lwamakhasimende kuwo wonke amaphuzu okuthinta abathengi, futhi uma kukhulunywa ngeselula, kukhona umsebenzi ocacile okufanele wenziwe. Kepha abathengisi abaqhubeke nokutshala imali kwizisombululo zabo ze-CRM (ukuphathwa kobudlelwano bamakhasimende) bazithole besesimweni esingcono sokuphatha lesi sidingo sesikhathi se-COVID. Amapulatifomu e-CRM ahlanganisiwe avumela abathengisi ukuphatha ulwazi lwabo lwamakhasimende kuzo zonke iziteshi, ukuhlanganisa idatha yabo yasesitolo nokuthengisa kwabo oku-inthanethi, ukuxhumana kwabo kwe-chatbot, ukuzibandakanya kwabo kwezokuxhumana nabantu, kanye nemiphumela yabo yomkhankaso we-imeyili.
Lokhu akusizi nje kuphela ukuhlinzeka ngomuzwa wamakhasimende onokwethenjelwa, lapho idatha yabo igcinwa iphephile futhi ihlala njalo ezindaweni eziningi zokuthinta, kepha futhi inenzuzo eyengeziwe yokufaka yonke idatha ebalulekile endaweni eyodwa ejwayelekile. Ukuthengwa kwedatha okuzenzakalelayo kwimicimbi eminingi kungahle kwenziwe kube yipulatifomu eyodwa; ama-oda agcwaliswa ngokushesha, izimbuyiselo zicutshungulwa kahle, futhi abanikazi banayo yonke idatha abangayicela ukunika amandla ukumaketha kwabo.
Ubuchwepheshe Bokumaketha Okuhlosiwe: Esikwaziyo Kuze Kube Manje
Ngokusakazwa kwedatha eningi, abathengisi bedijithali bazama izinkomba ezimbalwa ezihlukile. Phakathi kwamasu okuwina kuze kube manje kube ukwamukelwa kweqiniso elingathandwa kwabathelisi esikubona. I-augmented reality (AR) ixazulula inkinga enkulu yesikhathi se-COVID: ngiwethemba kanjani umkhiqizo uma ngingawuboni esitolo? Ngokushesha, amaqembu wokukhangisa ahlakaniphile asitholile isisombululo. Okuhlangenwe nakho kwe-AR kungalingisa ukubonakala kwefenisha egumbini lokuphumula, usayizi wephenti kuhlaka oluthile, umthunzi wezindebe ebusweni bekhasimende.
I-AR ikhipha ukuqagela ekuthengeni kwe-inthanethi, futhi isivele inikeza abathengisi imbuyiselo emangalisayo; abathengisi abanokusebenzisana, ukuboniswa kwemikhiqizo ye-3D babike izinga lokuguqulwa eliphakeme elingama-40%. Ukwenza ukubheja okuphephile abathengisi abangafuni ukuhlukana nokuthengisa kwabo okuphezulu noma kunini, I-Statista ilinganisiwe ukuthi imakethe engokoqobo engathandwa kwabathelisi esikubona izofinyelela kubasebenzisi abayizigidi eziyizinkulungwane ezingama-2.4 ngonyaka ka-2024.
Ekugcineni, amaqembu wokukhangisa ahlakaniphile ancike kakhulu ekwenzeni ngezifiso njengecebo elihamba phambili lokuthengisa, futhi kufanele. I-E-commerce inikeza into eyodwa ebesingasoze sayilingisa ezitolo: wonke umuntu othenga nge-inthanethi 'angahamba' aye endaweni engaphambili ngokuphelele, engaphambili. Ukwenza ngezifiso izincomo zomkhiqizo kunambitheka ye-shopper eku-inthanethi kwandisa amathuba okuthi abathengi bathole okuthile okubabamba iso ngokushesha. Ukwenza iminikelo eyenziwe ngezifiso kusho ukusebenzisa idatha kusuka ekuthengeni kwangaphambilini kwesiphequluli nomsebenzi wesayithi ukubikezela ukunambitheka kwabo; omunye umsebenzi osufinyeleleke kalula kakhulu ngamandla obuhlakani bokufakelwa. Ukwenza ngokwezifiso kuzoba yinsika yezentengiselwano ze-post-COVID, okuguqula isimo sezinto ezilindelwe ngabathengi.
Ama-Chatbots, ama-CRM ahlanganisiwe, kanye nezixazululo zedatha ezihlakaniphile kungasiza ochwepheshe bezokuthengisa ukuphatha isidingo sabo se-e-commerce. Imininingwane ekhuphukile evela ekuthengisweni kwe-inthanethi ingenza ukumaketha okuhlakaniphile, futhi ukutshalwa kwezimali ku-AR kubonakala kubheja okuphephile. Ekugcineni, noma kunjalo, ikhasimende liyohlala linegama lokugcina; Ukusinda kwe-post-COVID kuncike kubathengisi ababeka ikhasimende (elibonakalayo) kuqala.
Tags: Ukuboniswa komkhiqizo okungu-3daiukuhlakanipha okungekhona okwangempelaUkungathandwa kwabathelisi esikubonangaphakathi ebhizinisiniizingxoxoisipiliyoni sesiphambanoikhasimende kuqalaikhasimende-centrice-commerceezokuhweba ngekhompyuthadolobha enkuluokuhlangenwe nakho okuhlanganisiweukuthengisa okusebenzisanayoukuzenzelaizibalo
UZain Jaffer unguMsunguli kanye ne-CEO ye IZain Ventures, inkampani yokutshala imali enikezela ngezimali emhlabeni jikelele ukuqala kwezobuchwepheshe, izindlu ezithengiswayo, kanye nokulingana kwangasese. Njengosomabhizinisi kanye nomtshali-zimali osezingeni eliphakeme, uZain ululeka ngokuzimisela futhi utshale imali ekuqaleni kwezobuchwepheshe e-United States.
Ukuminyaniswa Kwesithombe Kuyadingeka Ekusetshenzisweni Kokusesha, Kwamaselula, Nasekuguqulweni